“Markaad la ciyaareyso Atlético Madrid, waa inaad sida ugu fiican wax u qabataa.” – Thomas Tuchel – Gool FM
(Madrid) 22 Feb 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta oo soo muuqday maanta oo Khamiis ah, wuxuu ku sheegay in Atletico Madrid aysan ku ciyaareynin garoonkeeda ay ka dhigan tahay inay lumisay mid ka mid ah faa’idooyinkeeda kulankan.
Labada koox ayaa ku kulmi doono Talaadada kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League garoonka Arena Nationala ee dalka Romania, sababo la xiriira xayiraadaha safarka ee u dhexeeya dalalka Britain iyo Spain.
Thomas Tuchel oo la weydiiyay su’aal ku aadaneyd bal hadii uu UEFA Champions League ka dhiganayo muhiimada koowaad ka tababare ahaan, ayaa wuxuu ku jawaabay, in markasta mudnaanta koowaad uu ka dhiganayo kulanba kulanka ka dambeeya ay kooxdiisa ciyaari doonto.
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa shirka jaraa’id uu ka soo muuqday waxyaabihii uu ka yiri waxaa ka mid ahaa:
“Dabcan Champions League waa tartan xiise leh, laakiin ciyaartoyda way ogyihiin inay tahay inay soo bandhigaan wax walba oo ay haystaan kulan kasta.”
“Markaad kula ciyaareyso Atletico wareega 16-ka, waxaad ogtahay inaad u baahantahay inaad soo bandhigto heer sare, sababtoo ah waa koox leh khibrad aad u sareysa iyo maskax weyn, wuxuu noqon doonaa dagaal xoogan.”